सुत्नुअघि गणेश भगवानको दर्शन गर्दै तपाईले जान्नै पर्ने कुरा,व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ? – live 60media
सुत्नुअघि गणेश भगवानको दर्शन गर्दै तपाईले जान्नै पर्ने कुरा,व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ?
सातामा कम्तीमा एक दिन व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो मानिन्छ ।तर, व्रत सकिएपछि मानिसहरु खान नहुने कुराहरु बढी खाएर पनि बिरामी पर्ने गरेका छन् ।दिनभरको व्रत सकिएपछि व्रतको दिन बेलुका अन्न खान नहुने भनिन्छ । तर, फलफूल र झोलयुक्त पदार्थ भने खान धार्मिक छुट छ ।
व्रतको दिनमा प्रशस्त पानी, फलफूल र फलफुलको जुस खान सकिन्छ । व्रत बस्दा निराहार बस्दा राम्रो भएपनि स्वास्थ्यमा समस्या हुनेले यी झोलिलो कुरा खान चिकित्सकहरूले सुझाएका छन् ।दिनभरको भोको पेटले तत्काल कडा खाना पचाउन नसक्ने भएकाले हल्का खाने कुरा खान सुझाइएको छ ।
लामो व्रतपछि एकैपटक धेरै खानेकुरा खाँदा शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएर मानिस बेहोस हुन सक्छ ।ठोस खाना मात्रै होइन, पानी पनि एक्कासी धेरै पिउनुहुँदैन । पहिले थोरै खाएर केही बेर आराम लिएपछि फेरि खानु उपयुक्त मानिन्छ ।व्रत सकिएपछि आँटाको रोटि बनाई आलूसँग खान सकिन्छ । व्रतमा साबदाना शुद्ध दुध मिलाएर शुद्ध परिकार बनाएर खाँदा पनि आडिलो हुने बताइन्छ ।
व्रतमा बदाम भिजाएर दुधमा लगाएर पनि खान सकिन्छ ।व्रत सकिएपछि केहि छिन रिलिफ भन्दै कोल्ड डिंक लिने बानी छ भने त्यसले मुटुमा गम्भीर खतरा पैदा गर्छ । खाली पेटमा तत्काल चिया पिउनु पनि ठीक नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।यसअतिरिक्त मसलेदार खाना पनि खानु राम्रो नहुँने बताइएको छ ।यो बेला रोटी, दाल, भात र तरकारी नै उत्तम हुन्छ ।
यो पनि -यस्तो हुन्छ सपनामा मन्दिर गएको देख्नुको खास अर्थ !
← चटपट बेचेर इञ्जिनियरिङ पढ्दै सचिन
झापामा घट्यो ड’र लाग्दो घ’टना, छोराले देखे यस्तो अवस्थामा आमाको ला’स (भिडियो हेर्नुस) →